Yohane Nhoma a Edi Kan 3:1-24
Yɛyɛ Onyankopɔn mma (1-3)
Onyankopɔn mma ne Ɔbonsam mma (4-12)
Yesu bɛsɛe Ɔbonsam nnwuma (8)
Monnodɔ mo ho (13-18)
Onyankopɔn so sen yɛn koma (19-24)
3 Monhwɛ ɔdɔ kɛse a Agya no de adɔ yɛn.+ Ɛno ne sɛ, wɔafrɛ yɛn Onyankopɔn mma!+ Na yɛyɛ ne mma nso. Eyi nti na wiase no nnim yɛn no,+ efisɛ ennim no.+ 2 Adɔfo, seesei yɛyɛ Onyankopɔn mma,+ nanso yennya nhuu sɛnea yɛbɛyɛ daakye.+ Nso yenim sɛ, sɛ ɔda ne ho adi a, yɛbɛyɛ sɛ ɔno, efisɛ yebehu no sɛnea ɔte no ara. 3 Na obiara a ɔwɔ saa anidaso yi wɔ ne mu no ma ne ho tew,+ sɛnea ɔno nso ho tew no. 4 Obiara a ɔte bɔne mu no, ɔte mmarato mu nso, na bɔne yɛ mmarato. 5 Munim nso sɛ, woyii no adi sɛ ommeyi yɛn bɔne mfi hɔ,+ na bɔne nni ne mu. 6 Obiara a ɔne no ayɛ baako no ntena bɔne mu;+ obiara a ɔte bɔne mu no nhuu no, na onnim no nso. 7 Mma nkumaa, mommma obiara nnnaadaa mo; nea ɔyɛ adetrenee no yɛ ɔtreneeni sɛnea ɔno nso yɛ ɔtreneeni no. 8 Nea ɔte bɔne mu no fi Ɔbonsam, efisɛ Ɔbonsam na wayɛ bɔne fi mfiase.*+ Eyi nti na woyii Onyankopɔn Ba no adi, sɛ ɔmmɛsɛe Ɔbonsam nnwuma.+ 9 Obiara a Onyankopɔn awo no no ntena bɔne mu,+ efisɛ Onyankopɔn aba* te onii no mu. Ɔrentumi ntena bɔne mu, efisɛ Onyankopɔn na awo no.+ 10 Nea ɛma yehu Onyankopɔn mma ne Ɔbonsam mma ni: Obiara a ɔnyɛ adetrenee no, omfi Onyankopɔn, na nea ɔnnɔ ne nua no nso mfi Onyankopɔn.+ 11 Eyi ne asɛm a mote fii mfiase no. Ɛne sɛ, yɛnnodɔ yɛn ho.+ 12 Ɛnsɛ sɛ yɛyɛ sɛ Kain a na ofi ɔbɔnefo no a okum ne nua no.+ Na adɛn nti na okum no? Efisɛ na ɔno ara ne nnwuma yɛ bɔne,+ na na ne nua no nnwuma teɛ.+ 13 Anuanom, mommma ɛnnyɛ mo nwonwa sɛ wiase no tan mo.+ 14 Yenim sɛ yɛafi owu mu aba nkwa mu,+ efisɛ yɛdɔ anuanom.+ Nea onni dɔ no te owu mu.+ 15 Obiara a ɔtan ne nua no yɛ owudifo,+ na munim sɛ owudifo biara nni hɔ a daa nkwa te ne mu.+ 16 Nea ama yɛahu nea ɔdɔ kyerɛ ne sɛ, ɔde ne nkwa* too hɔ maa yɛn,+ na yɛn nso, ɛyɛ yɛn asɛde sɛ yɛde yɛn nkwa* to hɔ ma yɛn nuanom.+ 17 Sɛ obi wɔ wiase ahonyade, na ohu sɛ ahia ne nua, na wanhu no mmɔbɔ a, dɛn na ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn dɔ te ne mu?+ 18 Mma nkumaa, mommma yɛmmfa ano anaa tɛkrɛma nnnɔ,+ na mmom yɛmfa yɛn nneyɛe nkyerɛ yɛn dɔ,+ na yɛnnɔ wɔ nokware mu.+ 19 Eyi na ɛbɛma yɛahu sɛ yefi nokware no mu, na yɛbɛma yɛn koma anya awerɛhyem wɔ n’anim. 20 Na sɛ yɛn koma bu yɛn fɔ wɔ biribi mu mpo a, Onyankopɔn so sen yɛn koma, na onim nneɛma nyinaa.+ 21 Adɔfo, sɛ yɛn koma mmu yɛn fɔ a, ɛnde yetumi de ahotoso kasa wɔ Onyankopɔn anim;+ 22 na biribiara a yebisa no, yenya fi ne hɔ,+ efisɛ yedi n’ahyɛde so, na yɛyɛ nea ɛsɔ n’ani. 23 N’ahyɛde no ara ne sɛ, yebenya gyidi wɔ ne Ba Yesu Kristo din mu,+ na yɛadodɔ yɛn ho+ sɛnea ahyɛde a ɔde maa yɛn no kyerɛ no. 24 Bio nso, nea odi n’ahyɛde so no ne no yɛ baako, na ɔno nso ne onii no yɛ baako.+ Na honhom a ɔde maa yɛn no na ɛma yehu sɛ ɔne yɛn yɛ baako.+
^ Nt., “efi bere a ɔhyɛɛ ase,” kyerɛ sɛ, efi bere a odii kan tew atua tiaa Onyankopɔn.
^ Kyerɛ sɛ, aba a etumi fifi anaa etumi sow.